ယောကျာ်းလေးတွေ သူတို့ချစ်တဲ့သူကို ချစ်ရက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့မရွေးချယ်တဲ့အကြောင်းရင်းများ - Tameelay
ယောကျာ်းလေးတွေ သူတို့ချစ်တဲ့သူကို ချစ်ရက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့မရွေးချယ်တဲ့အကြောင်းရင်းများ
ဘဝလက်တွဲဖော်ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူထက် ကိုယ်နဲ့တစ်ဘဝလုံးအဆင်ပြေမယ့်သူကိုရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေမှ အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရွေးချယ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ ယောကျာ်းလေးတွေလည်း အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တချို့ယောကျာ်းလေးတွေ သူတို့ချစ်တဲ့သူကတစ်ယောက်၊ လက်ထပ်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့သူကတစ်ယောက် ဖြစ်နေတတ်တာပါ။ ယောကျာ်းလေးအများစု သူတို့ချစ်တဲ့သူကိုချစ်ရက်နဲ့ လက်ထပ်ဖို့မရွေးချယ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ….
ချစ်ရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်ဖို့မစဉ်းစားတာဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘဝအခြေအနေမတူတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်ချစ်တဲ့အခါ အဆင့်အတန်းတွေ၊ အခြေအနေတွေက အရေးမကြီးဘူးဆိုပေမယ့် ဒီလိုမျိုး ဘဝအခြေအနေကွာဟခြင်းက ရေရှည်မှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူး၊ သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို မရနိုင်ဘူးလို့တွေးမိကြတာကြောင့် လက်ထပ်ဖို့ နောက်ဆုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
လူနှစ်ယောက်က ချစ်သူ၊ရည်းစားတွေအဖြစ်တွဲကြတဲ့အခါမှာ နှစ်ဖက်မိသားစုတွေ၊ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကို ထည့်မစဉ်းစားလည်းရပေမယ့် လက်ထပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ဖက်မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းတွေကို ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုလာပါပြီ။ တချို့ကလည်း ဒါတွေကိုထည့်မစဉ်းစားဘဲ လက်ထပ်ကြပေမယ့် တချို့တွေကတော့ ဒါတွေကိုထည့်စဉ်းစားပါတယ်။ ကိုယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့မိသားစုပုံစံနဲ့ သူကြီးပြင်းလာတဲ့မိသားစုပုံစံကမတူညီကွာဟတဲ့အခါ ရေရှည်မှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး စိတ်ညစ်စရာတွေများနိုင်တယ်လို့ တွေးမိတာကြောင့် ချစ်တဲ့သူကိုလက်မထပ်ဘဲ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့သူကိုပဲလက်ထပ်ဖို့ ရွေးချယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ မိသားစုကြောင့်ပါ။ မိသားစုကြောင့််လို့ဆိုရာမှာ မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူကိုရွေးလိုက်လို့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့မိသားစုရဲ့ပြဿနာကြားမှာ ညှပ်ပြီး ဖြေရှင်းရခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကို မကြုံချင်လို့ပါ။ တစ်သက်လုံးအတူတကွဖြတ်သန်းရတဲ့အချိန်တွေမှာ မိသားစုနဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကြားက ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့ အချိန်မကုန်ချင်တာကြောင့်ပါ။
ယောကျာ်းလေးတွေကလည်း သူတို့ရဲ့အနာဂတ်စိတ်ချလုံခြုံရဖို့အတွက်စဉ်းစားကြပါတယ်။ ရှေးခေတ်ကလို ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိဖြစ်ဖို့ဆိုတာထက် ဒီမိန်းကလေးရဲ့အတွေးအခေါ်၊အပြုအမူနဲ့ အကျင့်စရိုက် စတာတွေက ပေါ့ပျက်ပျက်ဖြစ်နေတယ်၊ အနာဂတ်မှာ ကိုယ့်အတွက် နွေးထွေးလုံခြုံမှုကိုမပေးနိုင်လောက်ဘူး၊ မိသားစုအတွက် မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မသေချာဘူးဆိုရင် လက်ထပ်ဖို့အတွက် ဝန်လေးတတ်ကြပါတယ်။
ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ တချို့ယောကျာ်းလေးတွေက စပြီးမတွဲခင်ကတည်းက လက်ထပ်ဖို့အဆင်ပြေ၊မပြေဆိုတဲ့အထိ စဉ်းစားထားတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုစဉ်းစားကတည်းက လက်ထပ်ဖို့အဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့သိပေမယ့် ဒီအတိုင်းအပျော်သဘော တွဲတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုအပျော်တွဲတယ်ဆိုတာကို မိန်းကလေးဘက်က အကဲခတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အချစ်စိတ်ကြောင့် မျက်စိမှိတ်ပြီးမယုံဖို့၊ ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ အမြဲတမ်းသတိပြုနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
ဘဝလကျတှဲဖျောရှေးခယျြတဲ့အခါ ကိုယျခဈြတဲ့သူထကျ ကိုယျနဲ့တဈဘဝလုံးအဆငျပွမေယျ့သူကိုရှေးခယျြတတျကွပါတယျ။ မိနျးကလေးတှမှေ အိမျထောငျဖကျကိုရှေးခယျြတာမဟုတျပါဘူး၊ ယောကျြားလေးတှလေညျး အိမျထောငျဖကျကိုရှေးခယျြကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တခြို့ယောကျြားလေးတှေ သူတို့ခဈြတဲ့သူကတဈယောကျ၊ လကျထပျဖို့ရှေးခယျြတဲ့သူကတဈယောကျ ဖွဈနတေတျတာပါ။ ယောကျြားလေးအမြားစု သူတို့ခဈြတဲ့သူကိုခဈြရကျနဲ့ လကျထပျဖို့မရှေးခယျြကွတဲ့အကွောငျးရငျးတှကေတော့ ….
ခဈြရဲ့သားနဲ့လကျထပျဖို့မစဉျးစားတာဟာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျဘဝအခွအေနမေတူတာကွောငျ့လညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ တကယျခဈြတဲ့အခါ အဆငျ့အတနျးတှေ၊ အခွအေနတှေကေ အရေးမကွီးဘူးဆိုပမေယျ့ ဒီလိုမြိုး ဘဝအခွအေနကှောဟခွငျးက ရရှေညျမှာအဆငျမပွနေိုငျဘူး၊ သာယာတဲ့အိမျထောငျရေးကို မရနိုငျဘူးလို့တှေးမိကွတာကွောငျ့ လကျထပျဖို့ နောကျဆုတျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
လူနှဈယောကျက ခဈြသူ၊ရညျးစားတှအေဖွဈတှဲကွတဲ့အခါမှာ နှဈဖကျမိသားစုတှေ၊ အသိုငျးအဝိုငျးတှကေို ထညျ့မစဉျးစားလညျးရပမေယျ့ လကျထပျကွမယျဆိုရငျတော့ နှဈဖကျမိသားစုအသိုငျးအဝိုငျးတှကေို ထညျ့စဉျးစားဖို့လိုလာပါပွီ။ တခြို့ကလညျး ဒါတှကေိုထညျ့မစဉျးစားဘဲ လကျထပျကွပမေယျ့ တခြို့တှကေတော့ ဒါတှကေိုထညျ့စဉျးစားပါတယျ။ ကိုယျကွီးပွငျးလာတဲ့မိသားစုပုံစံနဲ့ သူကွီးပွငျးလာတဲ့မိသားစုပုံစံကမတူညီကှာဟတဲ့အခါ ရရှေညျမှာအဆငျမပွမှေုတှဖွေဈနိုငျပွီး စိတျညဈစရာတှမြေားနိုငျတယျလို့ တှေးမိတာကွောငျ့ ခဈြတဲ့သူကိုလကျမထပျဘဲ ကိုယျနဲ့သငျ့တျောတဲ့သူကိုပဲလကျထပျဖို့ ရှေးခယျြကွတာဖွဈပါတယျ။
နောကျတဈခကျြကတော့ မိသားစုကွောငျ့ပါ။ မိသားစုကွောငျ့လို့ဆိုရာမှာ မိသားစုနဲ့အဆငျမပွတေဲ့သူကိုရှေးလိုကျလို့ ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျနဲ့မိသားစုရဲ့ပွဿနာကွားမှာ ညှပျပွီး ဖွရှေငျးရခကျတဲ့အခွအေနမြေိုးတှကေို မကွုံခငျြလို့ပါ။ တဈသကျလုံးအတူတကှဖွတျသနျးရတဲ့အခြိနျတှမှော မိသားစုနဲ့အိမျထောငျဖကျကွားက ပွဿနာတှကေိုဖွရှေငျးရငျးနဲ့ အခြိနျမကုနျခငျြတာကွောငျ့ပါ။
ယောကျြားလေးတှကေလညျး သူတို့ရဲ့အနာဂတျစိတျခလြုံခွုံရဖို့အတှကျစဉျးစားကွပါတယျ။ ရှေးခတျေကလို ဗိုငျးကောငျးကြောကျဖိဖွဈဖို့ဆိုတာထကျ ဒီမိနျးကလေးရဲ့အတှေးအချေါ၊အပွုအမူနဲ့ အကငျြ့စရိုကျ စတာတှကေ ပေါ့ပကျြပကျြဖွဈနတေယျ၊ အနာဂတျမှာ ကိုယျ့အတှကျ နှေးထှေးလုံခွုံမှုကိုမပေးနိုငျလောကျဘူး၊ မိသားစုအတှကျ မိခငျကောငျးတဈယောကျဖွဈဖို့ မသခြောဘူးဆိုရငျ လကျထပျဖို့အတှကျ ဝနျလေးတတျကွပါတယျ။
ဒါကတော့ရှငျးပါတယျ။ တခြို့ယောကျြားလေးတှကေ စပွီးမတှဲခငျကတညျးက လကျထပျဖို့အဆငျပွေ၊မပွဆေိုတဲ့အထိ စဉျးစားထားတတျကွပါတယျ။ အဲ့လိုစဉျးစားကတညျးက လကျထပျဖို့အဆငျမပွလေောကျဘူးလို့သိပမေယျ့ ဒီအတိုငျးအပြျောသဘော တှဲတတျပါသေးတယျ။ ဒီလိုမြိုး ကိုယျ့ကိုအပြျောတှဲတယျဆိုတာကို မိနျးကလေးဘကျက အကဲခတျတတျဖို့လိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ အခဈြစိတျကွောငျ့ မကျြစိမှိတျပွီးမယုံဖို့၊ ကွောငျးကြိုးဆငျခွငျနိုငျဖို့ အမွဲတမျးသတိပွုနိုငျဖို့လိုပါတယျ။
အရည်အချင်းရှိတဲ့ယောကျာ်းတွေ တန်ဖိုးထားလက်ထပ်ချင်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ …